အနာဂတ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဝေဖန်မှုတွေ ခံနေခဲ့ရခြင်း ၊ ကလေး မျက်နှာ နဲ့ လူသတ်သမား အဖြစ် ဆက်လက် ရှိနေသေးလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေအပေါ် တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ဆိုးလ်ရှား - SPORTS MYANMAR
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ နည်းပြ ဆိုးလ်ရှား က ယူနိုက်တက် နည်းပြ တာဝန် ကို ထမ်းဆောင် နေစဉ် ကာလ အတွင်း သူ့ရဲ့ အနာဂတ် နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်း တွေဟာ ရိုလာကိုစတာ လို အနိမ့်အမြင့် အတက်အကျ များခဲ့ ပေမယ့် သူ ကိုယ်တိုင် ကတော့ အဲ့တာ တွေကြောင်း ဆိုးကျိုး သက်ရောက်မှု ရှိခဲ့ ရတယ် လို့ လုံးဝ မခံစား ရကြောင်း ၊ သူဟာ ယူနိုက်တက် နည်းပြ တာဝန် အတွက် မှန်ကန်တဲ့သူ တစ်ဦး ဖြစ်တယ် လို့ပဲ ခံစားခဲ့ ရကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
အခြား တစ်ဖက် မှာတော့ ဆိုးလ်ရှား ဟာ ကစားသမား တွေ အပေါ် ကျရောက် ခဲ့တဲ့ ဝေဖန်မှု တွေကို မပြစ် မတင်ပဲ ဖိအား တွေကို ကိုယ်တိုင် ခံယူ ခဲ့တဲ့ အတွက် လက်ရှိ အချိန် မှာ ပရီးမီးယား လိဂ် ထိပ်သီး လေးသင်း စာရင်း ဝင်ရောက် နိုင်ရေး အတွက် မျှော်လင့်ချက် အားကောင်း နေခဲ့ သလို အခြား တစ်ဖက် မှာတော့ ယူရို ပါလိဂ် နဲ့ FA ဖလား ပြိုင်ပွဲ တွေ မှာလည်း ဖိုင်နယ် အဆင့် အထိ တက်ရောက် နိုင်ရေး အတွက် ရေပန်းစား နေခဲ့ ပါတယ် ။
” ကျွန်တော် ဟာ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် အပေါ် ယုံကြည်မှု လုံလုံလောက်လောက် ရှိနေ ခဲ့တဲ့ အတွက် ဝေဖန်မှု တွေ ခံနေ ခဲ့ရတဲ့ အပေါ် စိတ်ကုန်တာ မျိုး မဖြစ်ခဲ့ ပါဘူး ။ ပြီးတော့ လူတွေ က ကျွန်တော် နဲ့ အသင်း ဘာတွေ တွေးတော နေကြ သလဲ ဆိုတာ ကိုလည်း တွေးပြီး စိတ်ပူ နေတာမျိုး မဖြစ် ခဲ့ရ ပါဘူး ”
” ကျွန်တော် ဟာ အဲ့တာ တွေ အတွက် ဘာကြောင့် စိုးရိမ် နေဖို့ လိုအပ် သလဲ ? ကျွန်တော့် အနာဂတ် အကြောင်း ကိုလည်း ကျွန်တော့် ဖက်က စတင် ပြောကြား နေစရာ ဘာ အကြောင်းအရင်း တွေ ရှိနေ လို့လဲ ? အဲ့တာ တွေက ကျွန်တော် တစ်ယောက် ထဲပဲ ကြုံတွေ့ နေရတာ မဟုတ် ပါဘူး ။ ကျွန်တော် အဲ့တာမျိုး ဘယ်တော့ မှ မခံစား ရဖို့ မျှော်လင့် နေပါတယ် ”
” ကျွန်တော် ကတော့ အသင်း ရဲ့ ကစားသမား တွေ ကွင်းထဲ သွားရောက် ပြီး သူတို့ တွေက ဘာတွေလဲ ဆိုတာ ကို ပြသ နိုင်ဖို့ ၊ ကျွန်တော် တို့ ကစား စေလို ကြတဲ့ အတိုင်း ကစား ပြဖို့ ပဲ မျှော်လင့် နေပါတယ် ။ ကျွန်တော် ဟာ သူတို့ တွေ အပေါ် အမြဲတမ်း ယုံကြည့် ခဲ့ သလို ကိုယ်တိုင် အပေါ်လည်း ယုံကြည်ချက် များပြား ခဲ့ ပါတယ် ။ အဲ့တာ တွေ အကြောင်း ကို အော်ဟစ် ရှင်းပြ နေစရာ မလိုအပ်ဘူး လေ ” လို့ ဆိုးလ်ရှား က ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် ကစားသမား ဘဝ တုန်းက ကလေး တစ်ဦး လို မျက်နှာ အမူအရာ ကို ပိုင်ဆိုင် ခဲ့တဲ့ ဆိုးလ်ရှား ဟာ အရံ ကစားသမား အဖြစ် ကနေ အမြဲလို ပါဝင်ခွင့် ရရှိ ခဲ့သူ တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး သွင်းဂိုး တွေနဲ့ ပြိုင်ဖက် အသင်း ကို အမြဲလို ပြသနာ တွေ ပေးနိုင် ခဲ့သူ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အတွက် ကလေး မျက်နှာ နဲ့ လူသတ်သမား ဆိုပြီး နာမည်ရ ခဲ့သူ တစ်ဦး ပဲ ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။
သူဟာ ယူနိုက်တက် အသင်း ကို ဆု ဖလား သုံးလုံး ရရှိ ခဲ့တဲ့ 1998 – 99 ဘောလုံး ရာသီ တုန်းက ချန်ပီယံ လိဂ် ဖလား ရရှိ စေရေး မှာလည်း နောက်ကျ မိနစ် သွင်းဂိုး နဲ့ ကူညီ ပေးနိုင် ခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ သူဟာ လက်ရှိ နည်းပြ ဘဝ မှာလည်း အဲ့ဒီလို ရက်စက် တက်သူ တစ်ဦး အဖြစ် ရှိနေ သေးလား လို့ အမေး ခံလိုက် ရတဲ့ အခါ မှာတော့ …
” အဲ့တာ ကိုတော့ ကျွန်တော့် ရဲ့ ကစားသမား တွေကို ပဲ မေးမြန်း လိုက်ပါ ။ ကျွန်တော့် အကြောင်း တွေကို ကိုယ်တိုင် ပြောကြားဖို့ အလို မရှိ ပါဘူး ။ အကယ်လို့ သူတို့ တွေရဲ့ နေရာ မှာ ခင်ဗျား တို့ရဲ့ လူ တစ်ယောက် ကို ထားပြီး တစ်ကြိမ်လောက် စမ်းသပ် ကြည့်မယ် ဆိုရင်လည်း ရပါတယ် ။ ကျွန်တော် တို့ အခု တစ်ဆင့် မြင့်အောင် ကောင်းကောင်း ကစား ပြနိုင် ခဲ့ပြီ ဆိုတာ ကောင်းကောင်း သိပါတယ် ”
” ကျွန်တော့် ရဲ့ စိတ်ထား ကတော့ ကစားသမား ဘဝ နဲ့ အခုထိ အတူတူ ပါပဲ ။ ကျွန်တော် အသုံးမကျ တဲ့ အချိန် တစ်ယောက်ယောက် က လာပြီး မင်း အရမ်း ကောင်းတယ် လို့ ပြောဆို နေရင်လည်း ကျွန်တော် တစ်ကယ် အသုံး မကျတာ ကို သိရှိ ခံစား နိုင်စွမ်း ရှိသူ တစ်ဦး ပါ ။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော် အလုပ် လုပ်နေတာ က ကောင်းလား ၊ ဆိုးလား ဆိုတဲ့ အပေါ် သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်း တွေ ဖက်က ဝေဖန် ထောက်ပြ နေဖို့ မလိုအပ် ပါဘူး ”
” ကျွန်တော့် ရဲ့ အကြောင်း ၊ အနေအထား တွေကို ကျွန်တော် ကောင်းကောင်း သိပါတယ် ။ အသင်း နဲ့ ပတ်သက်ရင် လည်း အတူတူ ပါပဲ ။ အားလုံး မြင်တွေ့ သိရှိ နေကြတဲ့ အတိုင်း အသင်း က ဘယ်လို အချိန် တွေမှာ ကောင်းကောင်း ကစား ပြ နိုင်ခဲ့လဲ ဆိုတာ ကျွန်တော် ကောင်းကောင်း သိရှိ နားလည် ပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော် တို့ ကစားပုံ မကောင်း ခဲ့တဲ့ အချိန် မှာ တစ်စုံတယောက် က လာပြီး ချီးကျူး စကား ပြောမယ် ဆိုရင် ကျွန်တော် က ချက်ချင်း ပဲ ‘ နိုးပါ ၊ ဒါဟာ လုံလောက်စွာ မကောင်း ခဲ့ဘူး ‘ လို့ ချက်ချင်း ပြန်ပြော လိုက်မှာပါ ” လို့ ဆိုးလ်ရှား က ပြန်လည် တုန့်ပြန် သွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
ကော်ရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု အနေအထား များပြား ခဲ့တဲ့ အချိန် မတိုင်ခင် တုန်းက တော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ ရလဒ် ကောင်းတွေ ဆက်တိုက် ပိုင်ဆိုင် ထားနိုင် ခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲစုံ 11 ပွဲဆက် ရှုံးပွဲ မရှိ သေးတဲ့ မှတ်တမ်း ကောင်းကို ရယူ ထားနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ လက်ရှိ အချိန် မှာတော့ ကစားပွဲ တွေကို နားထား ပေမယ့် ယူနိုက်တက် ကစားသမား တွေ ကတော့ ယခင် အတိုင်း လေ့ကျင့်ရေး တွေကို ဟန်မပျက် လုပ်နေ ကြတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။